အကြောင်းအရာစျေးကွက်ရှာဖွေခြင်းနှင့်မလုပ်ခြင်း Martech Zone
တနင်္လာနေ့, စက်တင်ဘာလ 30, 2013 အင်္ဂါနေ့, အောက်တိုဘာလ 1, 2013 Douglas Karr
ကောင်းပါပြီ၊ မွန်းလွဲပိုင်းအတွက်ဒီနေရာမှာသင်၏ရယ်စရာပါ။ အသုံးပြုခြင်း Meltwater Buzzကျွန်ုပ်တို့သည်ဤရိုးရှင်းပြီးလှပသောသတင်းအချက်အလက်များကို၎င်းတို့၏အကြောင်းအရာများစျေးကွက်ရှာဖွေရေးနည်းဗျူဟာကိုရေးဆွဲရာတွင်စိတ်ထဲထည့်ထားရမည့်အချက်အလက်များစာရင်းကောင်းတစ်ခုထောက်ပံ့ပေးသည်ကိုတွေ့မြင်ခဲ့ရသည်။
ဘလော့ဂ်လုပ်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောစည်းကမ်းချက်များတစ်ခုမှာ ဆိုးဆိုးရွားရွားရေးသားထားသောဘလော့ဂ်ကိုမထုတ်ပါနှင့်။ သဒ္ဒါအကောင်းနှင့်စာလုံးပေါင်းကောင်းနေဆဲဖြစ်သောခေါင်းစဉ်မှားခြင်း၊ ထင်မြင်ချက်ကိုလက်တွေ့မဆန်ခြင်းဟုထင်မြင်ချက်ရေးသားခြင်းသည်မကောင်းသောအရေးအသားများစွာကိုကျွန်ုပ်မြင်တွေ့ခဲ့ရသည်။ ညံ့ဖျင်းသောကျမ်းစာ၌ရေးထားသည်ဘလော့ဂ်။ ကျွန်ုပ်၏ရေးသားချက်များသည်မကြာခဏညံ့ဖျင်းစွာရေးထားလေ့ရှိသော်လည်းကျွန်ုပ်တို့၌၎င်းတို့သည်အများအားဖြင့်မှန်ကန်သောသဒ္ဒါပညာရှင်များနှင့် orthographers အတွက်တန်ဖိုးရှိသောအကြောင်းအရာများရှိနေသေးသည်ဟုထင်ပါသလော။ ကျနော့်အမြင်အရ၊ သင့်ရဲ့အကြောင်းအရာရဲ့တန်ဖိုးဟာသူရေးထားတာဘယ်လောက်ကောင်းသလဲ။ ဒါကကျနော့်အမြင်ပဲ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါကသဒ္ဒါနဲ့စာလုံးပေါင်းကိုစုပ်နေလို့ပါ။
ခင်ဗျားရဲ့အကြောင်းအရာအားလုံးကိုတိတိကျကျရေးထားရမယ်လို့ငါပြောရင်၊ ငါဟာဒီအင်ဖိုဂိုဏ်းအတွက်တကယ့်ပြproblemနာဖြစ်နိုင်တယ်။ အဆိုပါသတင်းအချက်အလက်အဆိုပါဟုခေါ်သည် Do's နှင့် Dont's အကြောင်းအရာစျေးကွက်ရှာဖွေရေး။ ကျွန်တော့်ရဲ့အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားကိုကြောက်လန့်တကြားမသိဘဲတောင်မှကျွန်တော့်ကိုခေါင်းစဉ်မှာထပ်ခါတလဲလဲပြောဆိုစေခဲ့ပါတယ်။ အဲဒါမဖြစ်သင့်ဘူး အကြောင်းအရာစျေးကွက်၏ Dos နှင့် Don'ts?
1:2013 pm မှာအောက်တိုဘာ 9, 23
အံ့သြဖွယ်ကောင်းသည့်အချက်များ Doug! သငျသညျတဖနျရိုက်ပြီး .. ငါတကယ်အလွန်သိကောင်းစရာများဖတ်ခဲ့သည်။ ဝေမျှမှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်!
3:2013 pm မှာအောက်တိုဘာ 7, 25
ဟေးဒေါက်ဂလပ်၊ ဒါဟာအလွန်ကောင်းတဲ့ infographic ဖြစ်ပြီးအသုံးဝင်တဲ့အချက်တွေအများကြီးရှိပါတယ်။ ဒီ post မှာမင်းရဲ့မှတ်ချက်တွေကိုမဖတ်ရသေးခင်ခေါင်းစဉ်မှာပါတဲ့စာလုံးပေါင်းတွေကိုတောင်သတိမပြုမိ🙂 you're ပြီးတော့မှန်တယ်၊ ဒါက“ Dos” ဖြစ်သင့်သည်။